Laga yaabaa 15, 2018 admin
Coinbase dhawaaqay Suite alaabta hay'adaha
Cryptocurrency sarrifka Coinbase ku dhawaaqay in uu si rasmi ah u bilaabay Haynta Coinbase, wax soo saarka loogu talagalay taageerada korsashada cryptocurrency hay'adaha.
Xannaanaynta Coinbase waa adeeg kaydinta crypto a faray at hay'adaha maaliyadeed waaweyn.
Shayga waa qayb ka mid ah Suite ka mid ah waxyaabaha hay'adaha la bilaabay. Coinbase sharaxay sababta ay u doorteen in aan bilowno wax soo saarka ee deegaanka hadda, oo wuxuu ku yidhi:
“Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay in ka badan 100 lacagaha ku heraaray la abuuray in si gaar ah iyo cryptocurrency ganacsiga maal.”
Xannaanaynta Coinbase waa shuraako la Securities US a & Guddiga Exchange nidaamsan Somailand-dealer, sidaas isku leh hanti dhowrka xisbiga saddexaad iyo ansixinta warbixinta maaliyadeed, buuxiya shuruudaha “SEC nidaaminaya Somailand-dealer.”
Kraken $ 1m ugu deeqday in ay blockchain Koox garyaqaano u doodo quful Center
Jesse Powell, CEO of exchange cryptocurrency ku Kraken, deeqay $1 million in quful Center on Monday habeenkii doon ahayn ee gala sanadlaha ah urur ee ku sugan Magaalada New York. Kraken sidoo kale ballan-qaaday in helin deeq in quful Center ilaa iyo dhamaadka bisha, ilaa $1 million.
Waxa ay ahayd deeq ugu weyn ka dhigay in quful Center, ayaa sheegay in Neeraj Agrawal, Afhayeenka Washington, DC odoraska ay ku salaysan.
Bank of Zimbabwe mamnuucday hay'adaha maaliyadeed isticmaalaya Seeraar
Bank Reserve ee Zimbabwe ayaa ku amartay dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee dalka in si deg deg ah u joojiyaan ganacsiga ama transacting in cryptocurrencies.
bangiga dhexe ayaa sheegay in hay'adaha maaliyadeed waa baxdo wax xiriir jira la is dhaafsi lacagta dalwaddii gudahood 60 maalmood oo sii soco ilaa liquidate iyo celiyo kafado account jira.
RBZ diiwaan hay'adaha bangiyada, Norman Mataruka, ayaa sheegay in "Sida maamulka lacagta, Bank Reserve ee Zimbabwe waa qofka masuulka ah ee kalsoonida shacabka iyo waajib ku ah in uu ilaaliyo daacadnimada hababka lacag bixinta… Bank Reserve ay sii wadi doonto in ay si dhow ula socdaan horumarka cryptocurrency gobol iyo caalami ah si ay u wargeliyaan jihada siyaasada. "
Korea ee Upbit sarrifka cryptocurrency ugu weyn Oo Xaqiijiyay In dhammaan lacagaha ay yihiin dhab ah
UPbit ayaa xaqiijiyay in dhammaan lacagaha ay cryptocurrency yihiin dhabta ah, sida ugu horeysay sheegay @CryptoOfKorea.
sarrifka cryptocurrency ugu weyn ee South Korea ayaa ku dhawaaqay in ay ma xukumid lacag user iyo khiyaanayn maal-.
Thailand xayuubin 7% VAT on Xirfado crypto iyo rumayn 15% canshuurta cap guulaha
Waaxda Dakhliga Thailand ayaa ka tanaasulaan doonaa canshuurta qiimaha-daray (VAT) waayo, dadka Ganacsi ee cryptocurrencies suuqyada sarrifka ansixiyeen Guddiga Securities and Exchange ah (SEC).
Sharci cusub ee xukuma cryptocurrency dhaqan galay 14-kii May. Saroch Thongpracum, Agaasimaha waaxda ee arrimaha sharciyada, ayaa sheegay in on Tuesday u soo saari lahaa xeerka a dhaafayso VAT 7-boqolkiiba ee maalgashadayaasha shaqsi si loo yareeyo culayska cashuurta.
Shakhsiyaadka weli yeelan doonaan in ay bixiyaan a boqolkiiba 15-per-canshuur macaashka, sidoo kale loo yaqaan cashuur ka haynta a, on dakhliga macaamil.
sarrifka Cryptocurrency BitOasis hakisay soo bixid Fiat
sarrifka oo fadhigeedu yahay Dubai BitOasis ayaa ganaax ganacsiga UAE Dirham / BTC, xiganaya arrimaha bangiga qabsshada sarrifka laftiisa.
isgaarsiinta A loo diray dadka isticmaala BitOasis shalay in laga bilaabo Talaadadii, ma dirham more noqon karaa ka-dhaafsiga, tegaayo users la maanta oo kaliya in ay u guuraan ay dheelitirka meelo kale ama waxaa hogaanka la dirham dheeraad ah haddii la doonayo.
Currently, ma jirto taariikhda set for reactivation ee soo bixid dirham oo kayd by kala iibsiga silig.
LedgerX casriyaynta interface user for Seeraar fursadaha ganacsi
Seeraar taagayo madal LedgerX waxaa bilaabay cusub a, interface fududeeyay kuu oggolaanaysa in maal-Seeraar kasban xiiso on tirada ay.
Adeegga cusub, ayaa ku dhawaaqay Talaadadii, hawl la mid ah in ay fursadaha u jira Seeraar call la user wajiga fududeeyey ee maalgashadayaasha, sida uu sheegay madaxweynaha LedgerX iyo sarkaal halis sare Juthica Chou.
“Waxaan arkaya dheeraad ah iyo baahida loo qabo in badan oo dad raba si ay u helaan sort qaar ka mid ah xiiso off ay Seeraar iyo amaahda ma aha dhab ah oo dabiici ah in dadka – gaar ahaan amaahda halkaas oo ay ku kasban xiisaheeda dib u Seeraar. Sidaas tahay waxaan arkaya ka qaybgalayaasha u yimid inuu ganacsi dib.”
treatment ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 25, 2018 at 12:50 AM
convoying ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 29, 2018 at 1:30 AM
Aben ayaa sheegay in:
Clear ayaa sheegay in:
You are really a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Sidoo kale, The contents are masterwork. You have performed a magnificent job in this topic!